4 Ụzọ e si eme Iji Nweta ọtụtụ Of Your Train Journey | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > 4 Ụzọ e si eme Iji Nweta ọtụtụ Of Your Train Journey
4 Ụzọ e si eme Iji Nweta ọtụtụ Of Your Train Journey
Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji
(Emelitere ikpeazụ On: 06/03/2021)
Ọ bụrụ na nke a bụ gị oge mbụ njem ụgbọ okporo ígwè, e doro anya na ọ ga-nke mbụ n'ime ọtụtụ. n'eziokwu, onye ọ bụla nke e nyere njem ụgbọ okporo ígwè ohere wee mebie ara ya! Gịnị? N'ihi na ọ bụ ebube! N'adịghị ka ihe na-abụghị onye ụgbọelu agafe, iru ala ụgbọ ala tours, ma ọ bụ ụzọ na-arụ ọrụ nke ukwuu ụgbọ ala, a ụgbọ okporo ígwè na njem bụ mma, ngwa ngwa ma incredibly maa mma na ihunanya. Otu nwere ike na-arụ ụka na njem ụgbọ okporo ígwè bụ ezigbo ngwakọta nke Virginia Woolf enweghị uche na oge a. ah, ị ga-ahụ ya maka onwe gị na-ama.
Ebe ọ bụ na ị na-ama nwetara gị tiketi njikere - ebe a bụ ihe kacha mma 4 si eme iji na-enweta ọtụtụ ihe na ụgbọ okporo ígwè na njem:
Nọrọ n'Ebe si gị laptọọpụ & ekwentị
Anyị na-akwado gị zere akasiakde ke gị na laptọọpụ njem, dị ka ị ga-efu si na nke ukwuu! Kama, anya gburugburu, -ahụ ihe na-eme; enwe window echiche na ikpọ agwa n'èzí. Edebe ndị mmadụ gbara gị gburugburu na-eche banyere ihe ị na-adịghị na-emekarị nwere oge ime. Ọ bụ nke zuru okè ohere detoxify anya nke gị kwa ụbọchị Ngwa na ịnabata mara mma mgbagwoju anya nke a Train Journey na – n'ebe ọ bụla.
Milan na Venice Ụgbọ oloko
Padua na Venice Ụgbọ oloko
Bologna na Venice Ụgbọ oloko
Rome na Venice Ụgbọ oloko
Enwe ọhụrụ nke Train Journey
Anyị nwere ike ekwe nkwa na ị ga na na Itan Hawke – Julie Delpy Train Journey ọnọdụ na gị mbụ ụgbọ okporo ígwè (Oh, Bịanụ, anyị na-na na niile hụrụ na swooned n'elu The Tupu trilogy, na nzuzo, na-enwe olileanya na anyị ga-enwe otu akụkọ ịhụnanya na-eme anyị.) Tiekwa mkpu gị shei ka ahụmahụ ime. Olee otú ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi, na-akpali akpali, na fun mkparịta ụka ị ga-enwe? Ahụmahụ na-na na-emekọ ihe ndị mmadụ n'obodo dị iche iche bụ a mma mmetụta! Ọ dịghị mgbe ị maara otú ọtụtụ ndị mara mma enyi ị ga-ewu, ole na-azọpịa ị ga-enwe, ma ọ bụ mmadụ ole na-adọrọ mmasị ị ga-ezute. Ọ bụrụ na ị na-na na-adịghị oke ihere, ịbụ onye mbụ na-agbaji ice na okwu ndị ị na-ahụ na-akpali.
Lyon na Geneva Ụgbọ oloko
Zurich na Geneva Ụgbọ oloko
Paris na Geneva Ụgbọ oloko
Bern na Geneva Ụgbọ oloko
Travel na Groups
Nothing beats traveling around and taking a Train Journey to your ọkacha mmasị obodo na Europe na a ìgwè mmadụ na ị na-akpọ isiala nye. Ee, anyị mara ihe ị na-eche echiche – Olee otú m ga multitask site na onye ọ bụla chọrọ, arịrịọ, onye ọ bụla iwe iwe ọkụ, na tupu-zubere ebe – na na anyị dịtụ gị na na. ma, ihe bụ – ma ọ bụrụ na ị na-ahazi nke ọma ma na-enwe ihe n'eziokwu okwu tupu ị malite na njem a, ihe ga-aka mma karịa gị nwere ike iche.
Inggagharị n’otu n’otu ma n’ụbọchị ndị pụrụ iche lowers price budata maka ụgbọ okporo ígwè tiketi (ee, ị pụrụ n'ezie na-a ego na gị tiketi ka, asị, Trenitalia ma ọ bụrụ na ị na-aga na ngwụsị izu). Ọ na-enyekwa gị mmadụ iji kọọ ahụmịhe ahụ ma hụ ihe site n'echiche ndị ọzọ. na, na – ị drunkụbiga mmanya ókè na mba Europe ọzọ bụ maa mma n'etiti ndị ị maara karịa eme ya solo… àyi ziri ezi?, ma obu anyi kwuru eziokwu?
Luxembourg na Brussels Ụgbọ oloko
Antwerp na Brussels Ụgbọ oloko
Amsterdam na Brussels Ụgbọ oloko
Paris na Brussels Ụgbọ oloko
Malite a Train Journey Journal & Were Photos
Otu ụzọ kacha mma iji oge gị na a ụgbọ okporo ígwè bụ ịmalite a magazin n'usoro ichikota gị ahụmahụ. Anyị na-niile ụzọ nke ekechi anyị ọmụmụ, ụlọ ọrụ ndụ, kwa ụbọchị nsogbu na anyị na-emekarị-echefu ibiri nke na mfịna obi etiti na-eku ume nke a nke abụọ. Ede a magazin ga-enye gị ụfọdụ n'ọnọdụ na ihe, karịsịa mgbe ị na-aga azụ ya mgbe a mgbe. Plus, ọ ga-abụ ihe magburu onwe nchekwa nke njem gị, na a na-echetara nke ihe ị chọrọ ka obi / eche / ahụmahụ ọzọ.
Enwe gị ụgbọ okporo ígwè njem, nye onwe gị ikike iji zuru ike, ma makụọ ihe niile gbasara ụgbọ oloko gị! The kasị pụrụ ịdabere na ebe ịtụ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè bụ saveatrain.com n'ezie, ka – nweta movin '!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / tr aka / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
Atụmatụ Train Travel traveltips
Inweta Nrọ Europe: 5 Ga-Gị Mba
Ndụmọdụ Cargbọala, Njem ụgbọ oloko, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Zụlite Travel Greece, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe, Njem Iceland
Top 5 Best Ọnọdụ Iji Wepụta Christmas
Njem ụgbọ oloko, Train Travel France, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Zọ njem Sweden, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Top 5 Ọnọdụ ụgbọ oloko kachasị njem na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
10 Steakhouses kacha mma n'ụwa